ခံစားမှု ရသ အပြည့် ပေးစွမ်းခဲ့တဲ့ Monsters University 2013 Movie Review [720P HDrip အကြည် Download လုပ်နိုင်ပြီ] - အမျိုးကောင်းသား
Home » Movie » ခံစားမှု ရသ အပြည့် ပေးစွမ်းခဲ့တဲ့ Monsters University 2013 Movie Review [720P HDrip အကြည် Download လုပ်နိုင်ပြီ]
ခံစားမှု ရသ အပြည့် ပေးစွမ်းခဲ့တဲ့ Monsters University 2013 Movie Review [720P HDrip အကြည် Download လုပ်နိုင်ပြီ]
Michael “Mike” Wazowski ဆိုတာ ခြောက်နှစ်သား အရွယ်ရှိတဲ့ Monster လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ။ တနေ့တော့ Monsters Inc. လို့  ခေါ်တဲ့ Scaring Company တစ်ခုကို ကျောင်းခရီးစဉ်တစ်ခု အနေနဲ့ သွားခဲ့ရပါတယ် ။ အဲ့ဒီ့ Company မှာ Frank McCay လို့ ခေါ်တဲ့ Scarer တစ်ယောက်အနေနဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့ Monster တစ်ကောင်နဲ့ဆုံခဲ့ရပါတယ် ။ Monster ကမ္ဘာရဲ့ မရှိမဖြစ် ခွန်အားတွေဖြစ်လာမယ့် လူတွေရဲ့ ကြောက်လန့်တကြားအော်သံတွေထွက်အောင် ခြောက်လှန့်တဲ့ Scarer တစ်ကောင် ဖြစ်ပါတယ်။ Franks ကို အတုယူပြီး ခြောက်လှန့်ပြလိုက်တဲ့ Mike ကို သဘောကျသွားပြီး အမှတ်တရပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့ Franks ဟာ သူ့ရဲ့ Monsters University က ရခဲ့တဲ့ ဦးထုပ်ကလေးကို ပေးလိုက်ပါတယ် ။ အဲ့ဒီ့အချိန်ကစပြီး Mike ဟာ သူကြီးလာရင် Scarer တစ်ယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချခဲ့ပါတယ် ။
ဆယ့်တစ်နှစ်အကြာမှာတော့ Mike ဟာ Monster University ကို Scare Major ကျောင်းသား အဖြစ် ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ် ။
ကျောင်းရဲ့ ပထမဆုံး အတန်းချိန် Mike ဟာ မေးခွန်းတစ်ခုကိုဖြေနေတုန်းမှာပဲ Sully Sullivan ဆိုတဲ့ အပြာရောင် Monster ကြီးတစ်ကောင်ရဲ့ နှောက်ယှက်မှုကို ခံလိုက်ရပါတယ် ။ အတန်းချိန်အတွင်းမှာ Scare Program ရဲ့ ဦးဆောင်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Abigail Hardscrabble ဟာ ဒီ စာမေးပွဲမအောင်ရင် Scare Program က ထွက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းသတိပေးခဲ့ပါတယ် ။
တစ်ညမှာတော့ Sullivan ဟာ Mike ကို သူတို့ရဲ့ ကျောင်းတွင်းအဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Roar Omega Roar ထဲကို ၀င်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ် ။ Mike ရဲ့ ငြင်းပယ်လုိုက်မှုကြောင့် နဂိုကတည်းက မတည့်တဲ့ အခံရှိတဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ ပြိုင်ဘက်တွေအသွင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် ။
Mike ဟာ စာကိုသည်းကြီးမည်းကြီး ကြိုးစားတယ် ။ Sullivan ကတော့ လက်တွေ့ လုပ်မှသာ စာမေးပွဲ အောင်မယ်လုို့ ခံယူထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ လက်တွေ့များများလုပ်တယ် ။စာမေးပွဲ နီးလာတာနဲ့ အမျှ သူတို့ရဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုက ပိုပြီး ကြီးထွားလာပါတယ် ။ ဒီလိုပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကြောင့်လည်း သူတို့နှစ်ယောက်လုံး စာမေးပွဲ ကျသွားခဲ့ပါတယ် ။
နှစ်ယောက်လုံး Scare Program က ထွက်ရတော့မယ့် အချိန်မှာ Sullivan ဟာ သူတို့ရဲ့ အရည်အချင်းတွေကို Scare Game မှာ ပြသဖုို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး Mike နဲ့ အတူ တွဲလုပ်ဖို့ တိုင်ပင်ပါတော့တယ် ။
Scare Game မှာ ၀င်ပြိုင်ဖို့ အတွက် ကျောင်းမှာ နာမည်မကြီးတဲ့ Oozma Kappa ဆိုတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းသေးသေးလေးထဲကိုဝင်ခဲ့ပါတယ် ။
အဲ့ဒီ့နောက်မှာတော့ Scare Program ရဲ့ ဦးဆောင်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Hardscrabble ဆီကိုသွားပြီး အပေးအယူတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ် ။ အပေးအယူကတော့ Scare Game မှာနုိုင်ရင် Scare Program မှာ Mike နဲ့ Sullivan တို့ကို ပြန်ပြီး လက်ခံရမယ် ။ ရှုံးရင်တော့ နှစ်ယောက်လုံး ကျောင်းက ထွက်သွားရမယ် ပေါ့ ။
ကဲ Mike က ကော ကျောင်းမှာ ဘာအစွမ်းအစမှမရှိတဲ့ Oozma Kappa Team ကို ဘယ်လို Train ပေးမှာလဲ ?
သူတို့နှစ်ယောက် Scare Game ကို အောင်နုိုင်ပါ့မလား?
ဘယ်လို စည်းလုံးမှုမျိုးတွေနဲ့ Scare Game ကိုအောင်မြင်သွားမှာလဲ ?
ဒါမှမဟုတ် လူစွမ်းကောင်းများလွန်းတဲ့ Scare Game မှာ ရှုံးနုိုင်ပြီး ကျောင်းကပဲ ထွက်သွားရမလား?
နာမည်ကျော် Pixer Animation Studio နဲ့ Walt Disney တို့က ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ 3D Animation Movie လေးပါ ။
အားလုံးပဲ လက်လွတ်မခံသင့်တဲ့ Monsters University 2013 ပါ။ အရမ်းကို ကြည့်ကောင်းလှပါတယ်။ သည်းထိုက်ရင်ဖိုလေးဖြစ်ပြီး။အားကျ အတုယူဖွယ်လေးလဲဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်လို့ 720P HDrip ကို Download ရယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါလင့်မှာ Download ရယူနိုင်ပါပြီ။ အားလုံးပဲ Resume link ကောင်းကောင်းနဲ့ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
Download Monsters University 2013 720P HDrip >>
Tech Milo : Online Magazine >> https://www.facebook.com/TechMilo?ref=hl
Credit Link - http://www.techmilo.tk/2013/09/monsters-university-2013-movie-review.html
ပြန်လည်တင်ပြသူ Steel Jelly အချိန် 4:03:00 AM
Shweyoe Pro for iPhone/iPad/iPod Touch
Shweyoe Pro Dictionary လေးကတော့ App Store မှာဆိုရင် S$ 1.28 တန်ပါတယ် ဒါပေမယ့်ဒီမှာတော့ Free ရပါတယ် Developer ကတော့ ကို Zaw Min Soe ...
BLOODMASQUE v1.0.5 For iPhone ,iPad ,iPod 614MB
Floating Touch 2.02 apk for Android
Minion Suit apk for Android
Wise Auto Shutdown 1.34.62 Portable For Pc 1MB
Ashampoo Music Studio4v4.1.2.5 Portable For Pc(5...
iTools 2013 Build 0922 for window
Skynet က ဘောပွဲတွေကြည့်မယ် apk for Android
Virtua Tennis Challenge v1.2 For iPhone, iPad, iPo...
Dead Effect v 1.0 For iPhone, iPad, and iPod 336MB...
Rage Warriors v1.1.0 For iPhone, iPad 505MB
aerofly FS v1.0.7 For iPad 1.6G
Ubuntu အသစ်ထွက် 13.10 Beta Download And Screenshot...
Android အတွက် Plants vs. Zombies2International က...
Hip Hop - Nelly - M.O. (2013)MP3
iPhone 5s ကို Bullet test, Water test, Toture test...
KMPlayer 3.7.0.109 For Pc(31MB)
ကာလာစုံ ၊ ဒီဇိုင်းစုံ Frozen Keyboard apk For Andr...
IObit Malware Fighter Pro 2.1.0.18 For Pc(21 MB)
Username and Password Updated (KEYS 23.9.2013 )
How to Go Back to iOS6[iOS6ကို ပြန်ဆင်းနည်း]
iPhone4တွင် iOS7အဆင်မပြေမှု များဖြစ်
CloneDVD7Ultimate 7.0.0.10 For Pc (50MB)
Grand Theft Auto5PC Version အတွက် Screenshot အချ...
After Earth (2013) ဇာတ်ကားကြည့်ချင်တဲ့သူငယ်ချင်းမျ...
September 23 ရက်နေ့ ထွက်မည့် Microsoft Surface2T...
Zombie Gunship 1.0 For Apk(49 MB)
Weaphones: Firearms Simulator v2.1.0 For Apk(33MB)...
Gmail Account အလွယ်တကူလုပ်ကြမယ် (PC + Mobile Phon...
Nero Burning ROM 2014 v15.0.01300 For All Win 93MB...
ကီးဘုတ်ရဲ့Backgroud ကိုစိတ်ကြိုက်ပြောင်းမယ် Apk ...
Sonic & SEGA All-Stars Racing v1.0.1 apk Game 314M...
Five Finger Death Punch>>>The Wrong Side Of Heaven...
Download Jobs  720P Hdrip အကြည် [800MB] + En...
ဓာတ်ပုံတွေကို Locker လုပ်ထားချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအ...